Posted by admin on December 26 2016 15:31:58
HS;-WARARKA SIYAASADA SOMALIYA..............READ MORE
HS;-WARARKII UGU DANBEEYEY SIYAASADA SOMALIYA:-<Baro sida ay beelaha Somaliyeed awood QEYBSIGA u kala helayaan sanadkan hadii aadan la soconin xaqiiqada siyaasadeed ee maanta dalkeena taalo amaba doorashada soo socota sida ay beelaha Somaliyeed xukunka dalka u kala heli doonaan.
1-Beelaha Digil iyo Mirifle ma helayaan wax ka badan gudoomiyaha baarlamaanka Federalka Somaliya awood qeybsiga siyaasadeed ee dalka. 2-Beelaha Dirta gudoomiyaha Aqalka Sare
3- Beesha Daarood Xilka Madaxweynaha Somaliya booskaas sanadkan iyagaa leh micnahaad doono u bixi.
4-Hawiye xilka R/wasaaraha oo weliba loo madax banaaneynayo madaxweynaha cusub inuu ka keensado ciduu doono beelahaas midkood,qaabkaan waa midka 4-ta sano ee inagu soo aadan nidaamka 4.5 lagu soo afjari doono beelahuna kuraasta sare u kala heli doonaan.Warbixin dhameystiran dhawaan naga filo.
Daawasho Wacan Sawirka Maanta:-Magaalada Galdogob oo ka mid ah magaalooyinka ugu waaweyn gobolka Mudug kana tirsan Puntland waxey ka mid tahay magaalooyinka aad u kobcay 10 kii sano ee ugu dan beysay.magalaadu waxey hodan ku tahay xoolaha iyo geed miroodka loo yaqaano Jicibka amaba Yicibka hadba sidaas u taqaano.waxey ku taalaa amaba xuduud la leetahay dhulka Ismaamulka Somali Galbeed ee loo yaqaano maanta Zone Five.
HS;-MOGDISHU,SOMALIA 2016:- Musharax Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo ka mid ah musharaxiinta doorashada madaxtinimada Somaliya lagu wado hadii uusan sanadkan waqtiga iyo waayaha ka hiilinin inuu heer wanaagsan ka gaari doono,marka loo eego taageerada dhinaca shacabiyada ah ee uu heysto ayaa waxey hadane wararkii ugu danbeeyey ee aanu ka heleyno caasimada Somaliya ee Mogdishu sheegayaan inuu taageero badan ku heley qudbad uu dhawaan ka jeediyey magaalada Mogdoshu taasi oo uu kula talinayey musharaxiinta kale ee Somaliyeed iney aaminaan xildhibanada baarlamaanka federalka halkii ay taageero ka raadin lahaayeen dowlado shisheeye arintaan oo ay u riyaaqeen xitaa inta badan xildhibaanada cusub ee baarlamaanka federalka ee aan weli iyagu la dhaarin.
Farmaajo ayaa waxaa la saadaalinayaa inuu doorasho adag la gali doono dhawr musharax oo uu ugu horeeyo R/wasaaraha uu waqtigiisu dhamaaday haatana ah musharax u taagan qabasahada xilka ugu sareeya Cumar Cabdirashiid oo isagu marka dhinacyo badan laga eego doorashada Somaliya aad u diyaarsan sanadkan marka aanu barbar dhigno musharaxiin badan oo xilkaan u taagan. hayeeshee Farmaajo ayaa isagu helaya marba marka ka danbeysa taageero xoogan oo dhinaca shacabka ah tan iyo markii uu dalka dib ugu laabtay dalka Somaliya bartamahii isbuucii ina dhaafay,walow aysan shacabku waxbo dooraneyn.